Ogaden News Agency (ONA) – Golaha Shuurada ururka Culumada Ogadeniya oo Kulankoodii Usoo Dhamaaday.
Golaha Shuurada ururka Culumada Ogadeniya oo Kulankoodii Usoo Dhamaaday.
Posted by Wariye Qaran	/ March 17, 2019
Waxaa tariikhdu markay ahayd 13/3/2019 xerada Qaxootiga ee IFO ee dalka kiinya kafurmay shirkii golaha sharuuda ee ururka culimada somalida ogadeniya loona soo gabiyo (UCSO) kaasoo socday mudo sadex bari ah.
Waxaa shirka furay gudomiyaha UCSO mudane Sheekh maxamed Sheekh Yusuf kuna magac dheer Sheekh maxamed irshaad waxaa lagu furay sidii caadada inoo ahayd wacdi diini ah iyo quranka kariimka ah, gudoomiyaha ayaa war bixin waafi ka bixiyay hawlihii shaqada wixii u qabsoomay iyo barnaamij yada hor yaala ururka culumada Ogadeniya ee UCSO.
Intaaa kadib waxaa laga dooday dhawr qodob oo lagu gorfeeyay, marxaladahan kala guurka ah ayaa si qoto dheer looga hadalay waxaa kale oo laga hadlay midaynta umada somaliyeed iyo siday kaalin mug leh uga ciyaari lahaayeen culumada Ogaadeniya.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka hadlay qodobo kale oo dhowr ah ka hortaga khilaafadka iyo udiyaar gorowga wajiyada cusub ee halganka Ogaadeniya hada yeeshay.
Waxaa kaloo ayadana aad losoo hadal qaday dhisida iyo kubarbaarinta jiilka sookacaya ee rer ogadenya halganka JWXO, ku dhaqanka shareecada iyo dhaqanka Soomaalida.
Waxaana halkaa qimayn aaad usaraysa kasamey ururka USCO oo ah laan kamida halganka guud ee JWXO hormuudka u tahay, ururka UCSO ayaa sidoo kae waxay hoosta ka xariiqeen in gudaha la galo isla markaana dibudhis balaadhan lagu sameeyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
shirkan ayaa wuxuu gaba gabadii kusoo dhamaaday si guul ah waxaana la isku afgartay in lasii laban laabo kaalinta ay halganka ay ku lee yihiin ururka culumada Ogaadeniya.